I-Cozy Little Black Cottage-iSolar Powered - I-Airbnb
I-Cozy Little Black Cottage-iSolar Powered
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguMichael
I-Cozy Little Black Cottage- Inamandla eSola
Kuya kufuneka uzame le ndlu yangoku entsha izimele, inamandla elanga eneendawo ezimbini zokulala. Indawo yobuthongo yasemaphandleni kunye nokutshona kwelanga okukhulu. Ime kwicandelo elipheleleyo, iTokerau Beach kumgama oziimitha ezingama-200 kuphela ngendlela yokuhamba. Ukuzola okuphezulu kunye neendawo ezininzi ezivulekileyo ukonwabela iholide eyodwa. Isiseko esihle kuyo yonke iFar North yeNZ. inokunikezela ngeembalasane - 90 Mile Beach, Cape Reinga, iilwandle ezidumileyo, ukuloba, iGalufa njl.
Wamkelekile kwi-262 Tokerau Beach Road-I-Cozy Little Black Cottage
Ndicela uzenze ekhaya.
Le yiNkosana yethu eNcinane iNcinci emnyama, ngaphandle kwegridi yamandla, iSolar Powered ngokupheleleyo ngoqhagamshelo lwenkunkuma eqhelekileyo.
Amandla eSola – Ukuseta: Ukuba unqwenela ukusebenzisa izixhobo zokusetyenziswa koMbane oMkhulu njengesisomisi seNwele okanye usebenzise i-Induction cook-top / Toaster njl. njl. yekhawuntara, enkosi)
Ukuba ufuna ukusebenzisa isifudumezi esincinci esisecaleni kwefriji ukufudumeza i-Cottage nceda usisebenzise kuphela apho sikhoyo, ekuphela kwento ekufuneka uyenzile kukulayita umbane kwisixhobo sombane esinikiweyo esisecaleni kwefriji emgangathweni – indawo efanayo kuya kufuneka uvule ifriji ukuba ufuna ukuyisebenzisa.
Zonke iindawo zombane ezigungxulwayo kunye nezibane kuyo yonke i-cottage ziyi-240-Volts kunye nemveliso ephezulu evela kwi-inverter kwi-1800-Watt ngoko akukho ngxaki ukuqhuba izixhobo ezincinci zokusebenzisa amanzi. Inqaku elikhulu kukuba le nto i-eco-friendly.
Indlela esebenza ngayo kukuba eluphahleni kukho iiphaneli zeSolar ezi-2 X 300Watt ezibamba amandla elanga kwaye ziwondle nge-inverter kwaye zigcina amandla kwiibhetri ezinkulu ezi-2 zomjikelo onzulu kwiLaundry. I-inverter ke isondla amandla agciniweyo abuyele kwi-cottage kwi-240-volts / 1800-Watt yokusetyenziswa ngokuqhelekileyo. KuKhuseleko-nceda uwaphathe onke amanqaku ombane ngendlela obuya kwenza ngayo kwindlu eqhelekileyo.
Nceda usitsalele umnxeba ukuba kukho iingxaki: Michael 021637083
AMANZI: I-Cottage isemanzini etanki ngoko ke nceda ulumkele konke ukusetyenziswa kwamanzi njengoko sinexesha elide lokoma apha. Indlu yangasese igungxulwa kabini. Amanzi ashushu ngeGas kunye neCylinder phantsi kwecala elisezantsi lendlwana. Ukuba uphelelwe ngamanzi ashushu, nceda usazise ngokukhawuleza ukwenzela ukuba senze amalungiselelo e-cylinder entsha yeGesi. (Akufunekanga yenzeke njengoko siyijongile)
I-WIFI: Kukho uxhulumaniso lwe-WIFI olufumanekayo ngedatha encinci - nceda ungenzi ukukhuphela okukhulu, kuya kulunga ukusetyenziswa okuqhelekileyo. Kuqhagamshelo lwakho lwe-WIFI nceda ujonge: xxxxxxx > emva koko nceda uqhagamshelane nePassword: xxxxxxxxx > (nceda uqaphele imeko ebuthathaka)
I-TV, iFreeview, imiboniso bhanyabhanya elayishwe nge-USB: Ukubukela umabonakude kufuneka uvule zombini iTV kunye nebhokisi yeFreeview (Iindawo ezikude ezimbini) Qinisekisa ukuba umabonakude usetwe kwi "HDMI-1" ukuze ubukele onke amajelo aqhelekileyo eFreeview akhoyo, oku kukhethiwe. ngokusebenzisa iFreeview ekude. Ngaba ungathanda ukubukela imuvi okanye ezimbini sikulayishele iimuvi ezimbalwa kwi-USB eqhagamshelwe kwiTV-ukujonga iimuvi nceda ukhethe igalelo leTV elikude kwi-USB, jonga iimuvi, khetha leyo uyithandayo emva koko ucinezele. dlala kumabonakude – ukude, kuya kufuneka uphinde olu landelelwano ukuze ubukele enye imuvi.
I-BBQ: Ibhotile yegesi iphantsi komphezulu wekhitshi. Nceda uvule / VALE emva kokusetyenziswa. Ukuba i-BBQ i-self-lighter ayisebenzi i-gas lighter ende inikezelwa kwibhokisi yempahla, ukuba igesi iyaphela okanye ubona iphantsi nceda uqhagamshelane nathi. (Akufunekanga yenzeke njengoko siyijonga)
Ukucoca: Konke esikucelayo kukuba uzame ukuyishiya iCottage njengoko uyifumene, uyiphathe ngentlonipho ngathi yeyakho, enkosi ngobubele.
Ukutshaya: Siyakuxabisa “UKUTSHAYA” ngaphakathi kwiNkosana, ngaphandle kulungile – nceda ukhuphe iimpundu kunye nendawo kumgqomo wenkunkuma ongaphandle, enkosi.
Iivenkile zasekuhlaleni: (Isiphelo seNdlela yeTokerau Beach – Jonga iMaphu) – okanye ubuze nje umntu. Ivenkile yasekuhlaleni ivulwa yonke imihla ngePetrol, igrosari, utywala. Kwakhona - ngaphesheya kwendlela kwiqela leevenkile kukho iDive Shop, Takeaway kunye neBar.
Sebenzisa ikhowudi xxxx ukuvula ibhokisi yokutshixa ecaleni kocango lwesilayidi. Izitshixo zingaphakathi.
Enkosi, ngeembeko zobubele.
UMichael & Andrea
Umnxeba: 021 637 083
4.92 · Izimvo eziyi-130
Cape Reinga, 90 Mile Beach, Famous Beaches, Unique Cafes zonke zikufuphi ukonwabela.
Ngamanye amaxesha siya kufumaneka kwincoko okanye unokufowunelwa 24/7 ku +6421637083
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Karikari Peninsula